About About Us - ASAKA Machina Mugadziri & Mutengesi
Runhare: +86 13486165199
chisimudziso & winch
Ratchet Tie Pasi
Zhi Xing Machinery nguva dzose vanoomerera vatengi kutanga, garai chibvumirano, chengeta zvakanaka kutenda musimboti, akabata mafungiro akanaka kugutsa vatengi 'kudiwa.
Zhi Xing Machinery
Zhixing Machinery, iri muguta rakanaka reHangzhou, inyanzvi yekutengesa zvigadzirwa zvekusimudza. Zvigadzirwa zvikuru zvekambani zvinosanganisira kusimudza mabhandi, zviuno zvekushandisa, magetsi emagetsi, jacks, zvisungo zvekusunga uye zvimwe zvekusimudza. Izvo zvigadzirwa zvakapfuura CE, GS uye zvimwe zvitupa, uye zvinoenderana nematanho epasirese akadai seAustralia neAmerican zviyero. Pakati pezvigadzirwa zvedu, zvipfuramabwe, zviuno zvemanyorerwo nemajack zvinokwikwidza kwazvo mumusika. Ivo ndivo zvigadzirwa zvekambani yedu, izvo zvakagamuchira zvakanaka musika mhinduro.Yedu kambani ine anopfuura makore gumi neshanu ezviitiko mune yekusimudza indasitiri pamwe neakasimba kusimudza chigadzirwa kusangana masevhisi uye mhinduro kugona. Kambani yedu ine ruzivo rwekunze kunze kwenyika dzinopfuura makumi matatu, saka isu tinoziva kwazvo nezve kunze kwenyika zviyero uye misika zvido zvekusimudza zvigadzirwa kubva kuJapan, United States, United Kingdom, Germany, Australia, Singapore, Indonesia nedzimwe nyika. Vatengi vedu vari kuita basa rekuvaka zvikepe, chiteshi chekuvaka chikepe, kuchera simbi, kugadzira zvigadzirwa, njanji kununura, kutakura, kugadzira simbi, kuchengetedza mvura, simba remagetsi, simba remhepo, kuvaka, nezvimwe.
Kambani yedu yakazvipira kupa vatengi zvine kukwikwidza uye kugadzikana kusimudza zvigadzirwa, ichipa vatengi nemazvo uye isinganetse-isina mhando mhando. Yedu kambani inonyatso kudzora mhando yezvigadzirwa, uye inonyatso shandisa iyo pre-kugadzirwa sampuro yekutarisa yega yega batch yezvinhu, kuongororwa kwakasarudzika kweyekugadzira maitiro, kuongororwa kwechigadzirwa chakapedzwa usati watumirwa, uye kuendesa kweyekuongorora mishumo mushure mekutumirwa chengetedza mhando yechigadzirwa kusvika pamwero mukuru.
Yedu zita rekambani "Zhixing" zvinoreva kuti kambani inonamatira kune huzivi hwekubatana kwezivo nekuita, inobata mutengi wese nemoyo wese uye nekuvimbika. Hapana kubiridzira, hapana kuvanda uye hapana purofiti. Isu tinovavarira kuve wako akatsiga, kuhwina-kuhwina uye kuvimbika kwakasimba kwekusimudzira mudiwa!
Ndeupi mutsauko uripo pakati peketani ho ...
Ndeapi maitiro emagetsi ...
Genius inosanganisa Shimano Di2 uye SRAM hy ...
Simba rekudzorera winch musika ichaona ...
Electric hoist inoshandiswa muvaraidzo chiratidzo ...
NGUVA KUVAKA, LIANGZHU STREET, YUHANG DISTRICT, HANGZHOU CITY, ZHEJIANG Province, CHINA
Tidaidze Iye Zvino: +86 13486165199